Hendry noho ny Mark Cuban ve ianao? | Martech Zone
Zoma, Febroary 2, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Mety hahatsapa ho somary mihatsara ny tenanao ianao rehefa avy mitsidika ny Juicy Studio, izay manana fitaovana fandinihana an-tserasera hanamarinana ny haavon'ny famakiana ny tranokalanao…
Amin'ny Studio Juicy: Ny algorithms amin'ny haavon'ny famakiana dia manome torolàlana henjana fotsiny, satria manjary manome valisoa fehezanteny fohy misy teny fohy. Na dia mpitari-dalana henjana aza izy ireo, dia afaka manome famantarana mahasoa raha nametraka ny atiny ho an'ny ambaratonga mety ho an'ny mpihaino kasainao izy ireo.
Ka ambaratonga inona no tokony hanananao raha mamaky ireto bilaogy manaraka ireto ianao? Ity misy santionany amin'ireo tranonkala hafa folo, ny sasany amin'izy ireo dia bilaogy Top 100, ary ny ambaratonga famakian'izy ireo:
Ny tranokalako = 6.92
Nijery tranonkala roa hafa aho (tsy hotononiko izany)… ary yikes! Ny sasany tamin'izy ireo dia ambany dia ambany. Zahao ny tranokalanao miaraka amin'ny Fitsapana ny famakiana Studio Juicy.
NAOTY: Ny fametrahana an'ity lahatsoratra ity fotsiny dia hanova kely ny isa azoko… antenaina fa amin'ny lafiny tsara!
Azonao atao ve ny manapaka anao?
3 Feb 2007 tamin'ny 4:08 maraina
Misaotra amin'ny rohy. Ireto ny antontanisako.
Fanondroana zavona mitam-basy: 7.09
Mora mamaky Flesch: 71.41
Nampitahaiko tamin'ny tranokalan'ny Teknolojia BBC izany avy eo. Toa azo vakina kokoa ny tranokalako 🙂
Fanondroana zavona mitam-basy: 9.12
Mora mamaky Flesch: 58.69